Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ smart watch Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Ihe omume Samsung na-enyeghị onwe ya ọtụtụ ihe. Na mgbakwunye na igosipụta ekwentị ya ọhụụ, ya na Galaxy S10 na Galaxy Fold na okpu agha, ụlọ ọrụ Korea hapụrụ anyị ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị nwekwara ụfọdụ uwe ha nwere. Bụ ngwaahịa kachasị mkpa n'echiche a ihe ngosi Galaxy Watch, ihe ngosi ohuru ohuru.
Na mbido onwa a ugbua E nwere ụfọdụ ihihi banyere nke a Galaxy Watch Ọrụ Nke ika. Ya mere, anyị nwere ike ịnwerịrị echiche nke ihe ị ga-atụ anya site na smartwatch ọhụrụ a site na ụlọ ọrụ ahụ. N'ikpeazụ, na ihe omume a anyị amatala ihe niile gbasara ngwaọrụ ọhụrụ a. Elekere emere maka egwuregwu.
Ruo ọnwa ole na ole e kwuru na Samsung na-arụ ọrụ ọhụụ ọhụrụ, nke iji dochie Gear Sport. O yiri ka ahọrọla ọrụ Galaxy Watch a dị ka onye nnọchi n'ọnọdụ gị. Oge elekere nke ika na-ewebata mgbanwe ndị dị mkpa, ma na imewe ma na nkọwa ya. Mana nke ahụ kwere nkwa iweta ọtụtụ ọysụ na ụlọ ọrụ ahụ. Njikere izute elekere ọhụụ a?
1 Nkọwa Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
2 Samsung na-emegharị smartwatch ya nke ọma na Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Nkọwa Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Samsung bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa na nkewa akwa. N'ihi nke a, mmeghari ohuru a bu ihe di nkpa na oganihu ya na ahia mba uwa. Anyị na-ahụ mgbanwe dị iche iche na elekere a, ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị gara aga. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Nka na ụzụ nkọwa Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Nlereanya Galaxy Lee na-arụsi ọrụ ike
Usoro njikwa Tizen os
Ihuenyo 1.1 sentimita asatọ na mkpebi × 350 × 360 na Gorilla Glass
Nhazi Exynos 9110 (abụọ 1.15GHz cores)
Nchekwa n'ime 4 GB
Njikọ 4G / LTE Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11n NFC A-GPS
Atụmatụ ndị ọzọ NFC Nguzogide mmiri 5 ATM + IP68 NA MIL-STD-810G
Akụkụ 39.5 × 39.5 × 10.5mm (40mm)
Ibu ibu 25 grams
Mmekọrịta Android 5.0 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ iOS 9.0 ma ọ bụ karịa
Samsung kwadoro ya ọ bụ ha lightest nche ma. Ọ dị naanị gram 23, ka ị pụrụ ịhụ. Ihe nlere anya emebere maka egwuregwu. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe nnọchi anya eke nke Gear Sport. Ọ bụ ezie na na nke a anyị na-ahụ usoro mgbanwe dị mkpa. Ọmụmụ nke ọhụụ ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Korea.
Samsung na-emegharị smartwatch ya nke ọma na Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Firmlọ ọrụ Korea emeela ka ọ gbanwee kpamkpam usoro ngwaahịa ya niile, gụnyere ihe eji ejiji. Ya mere, anyị na-ahụ elekere ọhụụ nke ndị ọrụ ga-amasị ọtụtụ. Offọdụ n'ime nkọwa ya abanyela tupu o gosi ya. Yabụ anyị amaraworị ihe ị ga-atụ anya na ngwaọrụ a.
Samsung gosipụtara ya dị ka fechaa, dị mfe iji ma dịkwa ezigbo mma. Emebela atụmatụ a ka ọ dị mfe na nke a na Galaxy Watch. Firmlọ ọrụ Korea ewepụla bezel na-agbagharị na ngwaọrụ ahụ, nke gbanweela ọdịdị ya. Ọ nwere ihuenyo mmetụ aka na bọtịnụ abụọ n'akụkụ, nke ha ga-esi na-agagharị na ntanetị. Nọgide na-eji Tizen dị ka sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ ezie na interface ka gbanwetụrụ ubé na nke a. Ebe o nwere ụfọdụ ihe nke Otu UI.
E tinyewo ngwa etinyere etinyere n'ime elekere iji nyochaa mmega ahụ. Ọ nwere ọnọdụ nke na - achọpụta ozugbo ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na - egosipụta. Ke adianade do, kwuru, sị mmega ahụ na-nyochaa na acha egosi, nke mere na ọ dị mfe ịghọta kwuru ọmụma. Anyị nwekwara ihe nyocha ọbara mgbali elu na ya, dị ka ụlọ ọrụ Korea gosipụtara na ngosi ahụ. Na mgbakwunye na ihe mmetụta iji chọpụta nrụgide onye ọrụ. Zuru oke na nke a.
E wezụga nke a, Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ na-ejikọkwa ihuenyo AMOLED, ọnụọgụ ọnụọgụ obi na na-enye ohere ka ịdekọ ihe omume 6 dị iche iche. Anyị nwekwara ike ịnwe ndekọ nke ụra onye ọrụ. Yabụ ịnwere ike ịchịkwa n'akụkụ a. N'ihi elekere ahụ, ọ ga-ekwe omume ịdebe ahụike na ahụike nke onye ọrụ ahụ. Ọ bụ nghazi nke Samsung chọrọ ịnye ya.
Banyere nkọwa ndị ọzọ, ọ na-abịa na nguzogide mmiri nke 5ATM (50 mita miri emi) yana yana asambodo IP68, iguzogide mmiri na uzuzu. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe ijuanya na nwetara asambodo ndị agha MIL-STD-810G. Nke doro anya na-eme ka o doo anya na anyị na-eche ihu igwe na-eguzogide ọgwụ. Dị ka echere anya Bixby abanyela n'ime ngwaọrụ ahụ. Yabụ anyị ga-enweta ihe ncheta n'aka onye enyemaka. Ọ ga-echetara anyị na oge erugo ị orụ mmiri ma ọ bụ ibili na nkeji ole na ole.
Ozugbo Nkọwa zuru ezu nke a Galaxy Watch Ọrụ, ugbu a bụ oge iji mụtakwuo banyere ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ nke Samsung smartwatch ọhụrụ a. Achọpụtaghi ika ahụ ịbụ otu n'ime ọnụ ala dị ala karịa. Nke a agbanweela na smartwatch ọhụrụ a?
Banyere ụbọchị ntọhapụ anyị nwekwara data gbasara ya. Samsung ekwenyela na a ga-ebido ya n'ụlọ ahịa site na March 8, nke bụ otu ụbọchị ahụ zuru oke nke smartphones ya ga-abata. Yabụ na ọ ga-abụ ụbọchị juputara na nhapụ nke ụlọ ọrụ Korea.
A ga-arụ ọrụ Galaxy Watch na agba dị iche iche. Ruo ugbu a, agba ndị a kwadoro bụ: Silver, nwa, gold, gold green. Agbanyeghị na ebudataghị ya enwere karịa. Tụkwasị na nke ahụ, eriri 20 mm na-agbanwe. Yabụ ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ụdị nke masịrị ha n'oge niile.
Banyere ego nke igwe elekere a nke akara Korea agaghị enwe data ugbu a. Ọ bụ ihe anyị na-atụ anya ịnụ n'oge na-adịghị anya, yabụ anyị ga-ege ntị nke ọma na akụkọ banyere ngwaọrụ a. Anyị kwesịrị ịma n'oge na-adịghị anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a bụ smart watch Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ